အခွင့်ရရင် LilLi လေးရဲ့ Lalisa သီချင်းကကွက်ကို သင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Jennie
Lisa လေးရဲ့ album ဟာ ထွက်ရှိပြီးတာနဲ့ hit ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Vibe မျိုးစုံရအောင် Lisa က MV မှာ သေချာရိုက်ကူးထားပြီး ကကွက်တွေကလည်း main dancer ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ထိုက်တန်စွာ သေသပ်လှပချက်ပါဘဲ။ဒီသီချင်းရဲ့ Lalisa challenge ဟာလည်း ခေတ်စားနေပြီဖြစ်သလို လူငယ်တွေ စွဲလန်းနေကြပါပြီ။
Jennie လည်း ထို့အတူပါဘဲ။ ဒီကကွက်ကို စမ်းကကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ Weverse app မှာ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထို app မှာ Jennie ဟာ fan တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ခုလို reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Fan: Jennie unnie ရေ…lalisa MV ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းက ဘယ်အပိုင်းဖြစ်မလည်း??
Jennie: အကြိုက်တွေက အများကြီးဘဲ ဒါပေမဲ့ personally ပြောရရင်တော့ Rap ရွတ်သွားတဲ့ အပိုင်းကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ … အရမ်းလန်းတယ်”
Fan : “LALISA” challenge ကို စမ်းကြည့်ကြည့်ပြီးလား unnie ?
Jennie: Video တော့ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ သင်ဖို့အချိန်ယူပြီးရင်တော့ စမ်းကပါ့မယ်။ ဘာလို့ဆို အာ့တာက ခက်တယ်”
Jennie ကတော့ lisa ဆီမှာ သင်ပြီးရင်တော့ က ဖြစ်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရေ။ Jennie ဟာ ခုလို Weverse မှာ promotion ဆင်းပေးခဲ့သလို lisa album မထွက်ခင်ထဲက သူမရဲ့ Instagram story မှာ တောက်လျှောက် တင်ပြီး support ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဖူး။ Lisa MV ရိုက်ကူးတဲ့နေရာကိုလည်း သွားအားပေးခဲ့ပါတယ်။ lisa ကြိုက်တဲ့ balloon အဝါရောင်လေးနဲ့ smile ဆိုပြီး lisa အတွက် အားဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Jisoo နဲ့ Rosé လည်း ရောက်လာကြပြီး lisa Mv making ကို သေချာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ BLACKPINK member တွေ အချင်းချင်း ချစ်ခင်ကြင်နာမှုတွေက တကယ်ကြည်နူးစရာပါ။
Next 'The Penthouse' ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုက ဆိုးရွားလွန်းလို့ အိပ်မက်ဆိုးမက်ခဲ့ရရှာတဲ့ Kim So Yeon »
Previous « Mike နဲ့ (၇) နှစ်တာအချစ်ရေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းအား ဖွင့်ဟခဲ့သူ Pooklook
Music Chart နဲ့ ဆု​တွေကို တစ်သီကြီး သိမ်းပိုက်ဖို့ အ​စွမ်းကုန် ကြိုးစားပြင်ဆင်​​နေပြီဖြစ်တဲ့ Hwasa